Wararka - Qalabka Qalabka Daawada
Ka qaad haramaha, ciidda iyo qaybaha aan dawooyinka lahayn. Marka loo eego shuruudaha noocyada kala duwan, qaarkood waxay u baahan yihiin inay xoqaan maqaarka, sida xididka cad ee cad; qaar baa u baahan in la jaro jilif jilicsan, sida guf; qaar baa u baahan inay ka saaraan madaxa cawska, xididka buunshada leh iyo laamaha hadhaaga iyo caleemaha, iwm, ka dibna fuliyaan kala soocidda cabbirka, sida achyranthes, qoryaha cagaaran ee fooxa, Salvia, Angelica dahurica, Peucedanum, Shegan, Polygonum cuspidatum, iwm; Qaarkood waa inay diiriyaan wadnaha qoryaha, sida Danpi.
Uumiga, karkarinta, iyo xoqidda qaar ka mid ah maaddooyinka dawada ee ku jira istaarijiin badan ama kaarbohaydraytyada iyo muuska ayaa fudud in la qalajiyo. Qaarkood sidoo kale waxay ku jiraan enzymes kuwaas oo kala-baxa oo beddelaya qaar ka mid ah qaybaha ay ka kooban yihiin. Haddii ay kululaadaan, enzymes-ka ayaa waayi doona xooggooda. Hayso astaamaha dawada adigoon ka sii darin.
Qaar ka mid ah qalabka daaweynta rhizome, sida Danshen, Angelica dahurica, Peucedanum, Achyranthes, Shegan, Polygonum cuspidatum, Phytolacca, Pueraria lobata, Tufuling, Scrophulariaceae, iwm. ; Qalabka caafimaadka ee miraha aan sahlaneyn in la qalajiyo, sida xuan babayga, liinta, bergamot, iwm, waa in marka hore la gooyaa ka hor intaan la engejin; qalabka dawada ee jilif sida eucommia, magnolia, qorfe, iwm waa in sidoo kale loo kala googooyaa ama la jarjaraa inta ay cusub yihiin. Isku rogo tuubo ka dibna qalaji.
Ujeedada qalajinta ayaa ah in la fududeeyo keydinta iyo isticmaalka muddada-dheer, iskuna day in muuqaalka, urta iyo waxyaabaha ku jira maaddooyinka cayriin ee aan is-beddelin inta la qalalayo
Isticmaal iftiinka qoraxda iyo hawada dibedda si aad u qalajiso geedaha. Habka loo qalajiyo qorraxdu guud ahaan wuxuu ku habboon yahay qalabka dawada ah ee aan u baahnayn midab gaar ah isla markaana aan ku jirin saliid is bedbeddela, sida coix, burdock, astragalus, paeonol, eucommia, iwm. qalabku wuxuu leeyahay habab kala duwan. Marka la qalalayo, qalabka dawada ee la goostay ayaa sida caadiga ah lagu fidiyaa sariirta. Feejignow si aad uga hortagto roobka, sayaxa, oo aad uga hortagto dabayshu inay kala firdho, badanaana u wareejiso si kor loogu qaado qalajinta hore.
Ku dub qalabka caafimaadka heerkulkiisu hooseeyo adoo adeegsanaya qalajinta ama dabka dabka si aad u qalajiso qalabka dawada. Heerkulka waa in la xakameeyo inta lagu jiro qalajinta. Haddii heerkulku hooseeyo, ma sahlana in la qalajiyo. Haddii heerkulku aad u sarreeyo, tayada ayaa saameyn doonta. Haddii heerkulka rhubarb duban uusan ka badnayn 60 ℃, xumbada jidhku way madoobi doontaa oo tayada ayaa la dhimi doonaa. Aad u sarreeya, sida heerkulka ubaxyada qalinda lagu qalajiyo waxaa lagu xakameeyaa 38 ℃ -42 ℃.